Ihe omuma nke oma na-eme ka nhichapu ugwo nke uzo di iche iche
Ọ bụrụ na ị na-enyocha iwu nke ọ bụla, ị na-achọ "SEO" ma ọ bụ "ọdịnaya ahịa" na ị ga-enweta ọtụtụ ndebanye na nke a gụnyere ndị ọrụ na ndị na-agbalị ịlụ visibility. Ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-emekọ ihe ọnụ, ma ị na-eme ka a na-eme ka ọha na eze na ego na-enyere gị aka. Gịnị ka ị ga-eme iji nweta ihe niche uniques ma mee ka SEO dị mfe?
Jack Miller, onye nlekọta nke ahịa nke Shiol , ị ga-enwerịrị ndụmọdụ nke onye ọ bụla ị ga-enwerịrị.
Mara nke gị
Tupu ịchọta ihe ọ bụla, nweta oge ị ga-amụta ma ghọta onye na-ege gị ntị. Ị nwere ike ịmalite site na a na-achọpụta nke ahịa, ma ị chọrọ ị na-achọ ịmara mkpa nke ndị ahịa gị, na ndepụta na àgwà nke ịchọpụta ọdịnaya. Nke a ga-enyere gị aka ịchọta atụmatụ banyere otú ndị mmadụ na-eme nnyocha, ị na-enye ihe nkenke ka ọ bụrụ ihe kacha mma ị ga - eme ka ọ bụrụ maka mkpa nke ndị na - ege gị ntị.
Na-eji ederede ogologo oge
The best time pour commencer la recherche mot-clé à long terme bụ otu mgbe ị na-aghọta okwu gị na-ege ntị search nke ozi ma ọ bụ ngwaahịa na gị niche. Mmekọrịta nke Hummingbird na Panda de Google nwere mmetụta dị njọ na okwu ndị bụ isi, ma okwu ndị dị na ogologo oge na-arụ ọrụ maka ọpụrụiche ọ bụla. Ọ bụrụ na ị na-elekwasị anya na okwu ndị ị na-enyekwu na-arụ ọrụ, jiri okwu ndị dị na ogologo oge, ya bụ, ajụjụ na azịza nke usoro, ọ bụ ndị kasị mma maka naanị niches.
Echiche mbụ naanị
N'ihe na-eme ka echiche ndị ọzọ dị ọhụrụ, chọta ezigbo echiche. Ị nwere ike ịme site na ịchọpụta na ịchọta ajụjụ ndị a na-enwetụbeghị mbụ. Nke a ga-eme ka gị na gị marque na la grandeur..
Chọta ebe maka ndị na-edepụta ihe na saịtị
Iji nweta mmelite nyocha na ngalaba njikwa, ị ga-achọ inyebanye na ntinye ma ọ bụ ozi nke na-elekwasị anya na nkedo. Nke a pụtara na ị ga-arụ ọrụ na ndị na-ede akwụkwọ. Ị nwere ike ide ọdịnaya nke bụ akụkụ dị mkpa maka gị siri ike - ma ọdịnaya kwesịrị ịbụ ihe bara uru maka ọha na eze gị editọ. Nke a nwere ike ime ka ị ghara ime ihe ọ bụla, ma ọ bụrụ na ị obtiendrez ga-eme ka ịchọta ihe ị na-achọ.
Na-agbakwunye gị na ndị na-na na na na na na na na, contact them and learn what they do differently and be sure to share your ideas as well. Ọ dịghị ihe ize ndụ ebe a n'ihi na gị niche bụ obere na ị gaghị abara.
Ebe ọ bụ na ị nweghị ihe ọ bụla ị ga-eji maka gị campagne de référencement, startz petite. Jiri okwu ole na ole na-agụnye ọdịnaya tupu gị nnukwu ịkwalite. Nke a ga-enyere gị aka ịchọta ozi ndị ga-adị oké mkpa mgbe ị na-eto eto.
Jiri social media n'ihi na ọ bụ ihe kasị mma mgbakwunye na ndị mmadụ ị chọta. Ndị mgbasa ozi sociales na-abụkwa ebe kacha mma maka imelite gị n'ihu tupu ị na-elekwasị anya na ọkwa. Ọ ga-enyekwara gị aka ị jikọọ ya na ndị na-eduzi gị, na-akpalite ọdịnaya gị na iji meziwanye nsonaazụ gị.
Ịmepụta otu obodo na saịtị
Nke a nwere ike ime site na otu forum ebe ndị ọrụ gị na-abanye na-enweghị ndị ọzọ. Nke a na-akwalite otu nnukwu ọrụ na enyemaka maka ịchọta ihe ọhụrụ.
Iji wulite ezigbo mmekọrịta gị na ndị editọ gị na-ede akwụkwọ, ịkwesịrị ịkwado ọdịnaya ọha mmadụ. Ị nwere ike ịmepụta gị blogs na sub-ngalaba, ma ọ bụghị na-atụgharị uche na gị nchịkọta blog. Nke a ga-eme ka ọha na eze gbakwunye na ị na-akọrọ ọdịnaya gị.